Iindaba-Ukusetyenziswa kwempompo yePeristaltic kwonyango lwamanzi enkunkuma
Ukusetyenziswa kwempompo yePeristaltic kwonyango lwamanzi enkunkuma
Kule minyaka idlulileyo, ngenkqubela phambili yokuqhubeka kwezamashishini kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini, uqoqosho lwentlalo lukhule ngokukhawuleza, kodwa ingxaki yongcoliseko elandelayo ibe ngumba obalulekileyo ofuna ukusonjululwa ngokukhawuleza. Unyango lwelindle ngokuthe ngcembe lubaluleke kakhulu kuphuhliso lwezoqoqosho nakukhuseleko lwezixhobo zamanzi. icandelo. Ke ngoko, ngamandla ukuphuhlisa itekhnoloji yonyango lwelindle kunye nenqanaba loshishino yindlela ebalulekileyo yokuthintela ungcoliseko lwamanzi kunye nokunciphisa ukunqongophala kwamanzi. Ukucocwa kwelindle yinkqubo yokucoca ilindle ukuhlangabezana neemfuno zomgangatho wamanzi zokukhuphela kumanzi athile okanye ukuphinda usetyenziswe. Itekhnoloji yonyango lwelindle yanamhlanje yahlulwe yonyango lokuqala, olwesibini nolwesithathu ngokomgangatho wonyango. Unyango olusisiseko ikakhulu lususa umba omileyo oqinileyo kumanzi amdaka. Iindlela zomzimba zihlala zisetyenziswa. Unyango lwesibini lususa ikakhulu i-colloidal kwaye inyibilike izinto eziphilayo kwilindle. Ngokubanzi, ilindle elifikelela kunyango lwesibini linokuhlangabezana nomgangatho wokukhutshwa, kunye nendlela esebenzayo yedreyini kunye nendlela yonyango ye-biofilm zihlala zisetyenziswa. Unyango oluphezulu kukuqhubeka nokususa ukungcola okukhethekileyo, okufana ne-phosphorus, i-nitrogen, kunye nezinto ezingcolisayo eziphilayo ekunzima ukuzenza kwi-biodegrade, izinto ezingcolileyo ezingaphiliyo kunye nezifo.
Ukhetho oluchanekileyo noluthembekileyo
Iimpompo zePeristaltic zisetyenziswa kakhulu kwiinkqubo zonyango lwelindle ngenxa yeempawu zazo. Ukhuseleko, oluchanekileyo nolufanelekileyo lweekhemikhali kunye nokuhanjiswa ziinjongo zayo yonke imisebenzi yonyango lwelindle, efuna iimpompo eziyilelwe ukuphatha ezona zicelo zinzima.
Impompo ye-peristaltic inamandla okuzimela kwaye inokusetyenziselwa ukuphakamisa inqanaba lamanzi amdaka ukuba anyangwe. Impompo ye-peristaltic inamandla asezantsi okucheba kwaye ayizukutshabalalisa ukusebenza kwe-flocculant xa uhambisa i-shecculants ethe-ethe. Xa impompo ye-peristaltic ihambisa ulwelo, ulwelo luhamba kuphela kumbhobho. Xa uhambisa ilindle eliqulathe udaka nesanti, ulwelo olumpontshisiweyo aluyi kuqhagamshelana nempompo, kuphela ityhubhu yempompo eya kuqhagamshelana nayo, ke akusayi kubakho nto ijamming, nto leyo ethetha ukuba Impompo inokusetyenziswa ngokuqhubekayo ixesha elide, kwaye impompo efanayo inako isetyenziselwe ukuhambisa ulwelo olwahlukileyo ngokutshintsha nje ityhubhu yempompo.
Impompo ye-peristaltic ine-fluid ephezulu yokuhambisa ngokuchaneka, okungaqinisekisa ukuchaneka komthamo wolwelo we-reagent eyongeziweyo, ukuze umgangatho wamanzi uphathwe ngokufanelekileyo ngaphandle kokongeza izinto ezinobungozi. Ukongeza, iipompo ze-peristaltic zikwasetyenziselwa ukuhambisa iisampulu ezivavanyiweyo kunye nezinto zokuhlaziya izixhobo ezahlukeneyo zokuchongwa komgangatho wamanzi kunye nezixhobo zohlalutyo.
Njengoko unyango lwamanzi amdaka kamasipala kunye noshishino luya luchaphazela ngakumbi kwaye luyinkimbinkimbi, iidosi ezichanekileyo, ukuhanjiswa kweekhemikhali kunye nokudluliselwa kwemveliso kubalulekile.
Inkampani yokucoca amanzi isebenzise iBeijing Huiyu fluid peristaltic pump YT600J + YZ35 kwinkqubo yovavanyo lokuhambisa amanzi amdaka kwi-biofilm ukuhambisa ilindle eliqulathe udaka nesanti kwi-biofilm reaction tank ukunceda ukuqinisekisa ukusebenza kwenkqubo yonyango lwelindle ye-biofilm. ukwenzeka. Ukuze ulugqibe ngempumelelo uvavanyo, umthengi ubeke phambili ezi mfuno zempompo ye-peristaltic:
1. Impompo ye-peristaltic inokusetyenziselwa ukumpompa ilindle ngomxholo wodaka we-150mg / L ngaphandle kokuchaphazela ubomi benkonzo yempompo.
2. Uluhlu olubanzi lokuhamba kwelindle: ubuncinci be-80L / hr, ubuninzi be-500L / hr, ukuhamba kungalungiswa ngokweemfuno zenkqubo.
3. Impompo ye-peristaltic inokusetyenzwa ngaphandle, iiyure ezingama-24 ngosuku, umsebenzi oqhubekayo kwiinyanga ezi-6.
Ixesha Post: Feb-04-2021